Baarlamaanka Puntland oo sharci darro ku tilmaamay codsigii uga yimid Xeer ilaalinta | Somsoon
Home WARAR Baarlamaanka Puntland oo sharci darro ku tilmaamay codsigii uga yimid Xeer ilaalinta
Baarlamaanka Puntland oo sharci darro ku tilmaamay codsigii uga yimid Xeer ilaalinta
Xildhibaanada baarlamaanka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku diiday, warqad uga timid Xeer Ilaalinta maamulka Puntland oo looga codsaday xildhibaanada in ay xasaanadda ka qaadaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland.
Xeer ilaalinta Puntland ayaa iyadu horay u dalbatay in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil Xassan Daad, si dacwad ay ugu soo oogto waxna looga weydiiyo su’aallo uu weydiiyay madaxweyne Dani, xilli uu furayay Kalfadhiga 45aad ee baarlamaanka Puntland.
Xildhibaannada ayaa ka hor inta aysan cod u qaadin codsiga Xeer Ilaalinta, waxay warbixin ka dhegaysteen guddiga shuruucda iyo cadaaladda golaha wakiilada Puntland oo loo diray in ay ka soo tala bixiyaan warqaddi golaha uga timid xeer Ilaalinta.
Guddoomiyaha guddigaas Xildhibaan Saadaq Abshir oo warbixinta u akhriyay baarlamaanka, ayaa sheegay in su’aalihii xildhibaan Cawil Xassan Daad uu furitaankii Baarlamanka ku weydiiyay madaxweyne Deni ay waafaqsanaayeen dastuurka maamulka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka.
Intaa kadib ayaa 41 xildhibaan oo soo xaadirtay kulanka waxa ay cod u qaadeen codsigii xeer ilaalinta ee lagu dalbanayay in xasaanadda laga qaado Xildhibaan Daad, waxaana codsigii xeer ilaalinta cod gacantaag ah oo loo qaaday ku diiday 39 xildhibaan.
Xildhibaan Cawil Xasan Daad oo ka mid ahaa mudanayaashii soo xaadiray kulanka ayaa u mahadceliyay Xildhibaanada kale Baarlamanka, kuwaas oo cadeeyay in su’aashii uu weydiiyay Madaxweynaha ay aheyd mid waafaqsan dastuurka maamulka.
Article horeWafdi uu hoggaaminayo Farmaajo oo ku wajahan Beledweyne
Article socoda Golaha Shacabka oo maanta ansixiyay xisaab xirka miisaaniyaddii sanadkii 2017-kii